Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti oo Muqdisho ku soo wajahan – Gedo Times
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti oo Muqdisho ku soo wajahan
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda uu soo gaaro wafdi uu hogaaminayo Guddoomiyaha Baarlamaanka dalka Jabuuti.
Wafdiga Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti waxaa ka mid ah Xildhibaano iyo masuuliyiin kale oo ka socda Dowladda Jabuuti.
Garoonka Diyaaradaha ee Muqdisho ayaa waxaa ka socda qaban qaabo lagu soo dhaweynayo wafdiga uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Baarlamaanka dalka Jabuuti.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in dhammaan Xildhibaanada iyo Guddoonka ay ka qeyb qaadanayaan soo dhaweynta wafdiga uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Baarlamaanka dalka Jabuuti.
Kheyrre oo Xaflad loogu qabtay M/Baydhabo ee Koonfur Galbeed